Taratasin'ny fiarakodia :: Be mpitaky ny fanokafana ny foibe CIM Ambohidahy • AoRaha
Taratasin’ny fiarakodia Be mpitaky ny fanokafana ny foibe CIM Ambohidahy
Maro ireo olona manandraharaha ao amin’ny Foibe fanomezan-daharan’ny fiarakodia sady famoahana fahazoan-dalana mamily ary ny taratasin’ny fiara (CIM), eny Ambohidahy, no mitaky ny famerenana ny fisokafan’ity ivon-toerana ity, na farafaharatsiny hametrahana ny fiandrasan-draharaha. Niato avokoa ny asa rehetra etsy amin’ny CIM nanomboka tamin’ny fampiharana ny hamehana ara-pahasalamana ho fiadiana amin’ny valanaretina. Tsy tafiditra ao anatin’ ireo biraom-panjakana hisokatra ny foibe, na dia efa miha miala tsikelikely amin’ny fihibohana aza ny eto Antananarivo.
Hisy ny fandaminana tsy maintsy hatao alohan’ny hanokafana ny foibe, hoy fotsiny ny nambaran’ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ahitana olona manan-draharaha miverimberina hatrany etsy Ambohidahy noho ny tsy fahafantarana ny fiverenan’ny fisokafany ka mitsapatsapa fotsiny.
Nanazava ny loharanombaovao iray avy ao amin’ny CIM fa: « isan’ireo toerana mandray olona an’arivony ny foibe etsy Ambohidahy. Tsy ho voafehy mihitsy ny olona ho tonga eto, ka najanona mihitsy aloha ny asa rehetra, na dia ny fiandrasan-draharaha aza. Andrasana ny baiko avy amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana momba ny fotoana hisokafan’ ny Cim indray ».
Na izany aza, fantatra fa manan-kery hatrany ireo taratasy nokarakaraina tao amin’ny CIM efa lany daty noho ny tsy fahafahana manavao an’izany vokatry ny fikatonan’ny foibe.